निको नहुने रोगबाट ग्र’सित १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई मा’र्न सरकारको अनुमति – Dainik Sangalo
निको नहुने रोगबाट ग्र’सित १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई मा’र्न सरकारको अनुमति
October 20, 2020 449
काठमाडौं। उपचार नहुने रोगबाट ग्रसित केही बालबालिकाहरुलाई मा र्नको लागि नेदरल्याण्ड सरकारले अनुमति दिएपछि चिकित्सा क्षेत्रमा गम्भीर बहसको सृजना भएको छ । अहिले नेदरल्याण्डमा केही यस्ता बालबालिकाहरु छन् जो उपचार नहुने रोगबाट ग्रसित छन् । ती बालबालिकाका परिवारले आफ्ना सन्तानको यो कष्ट सहन नसकेर उनीहरुको जीवन अन्त्य गर्ने अनुमति मागिरहेका थिए । अहिले सरकारले त्यस्तो अनुमति दिएको हो । डच सरकारको यो अनुमतिसँगै चिकित्सा क्षेत्रमा यसरी बालबालिकालाई मृ’ त्यु दिने तरिकाबारे बहस सुरु भएको छ ।नेदरल्याण्ड सरकार पहिलेदेखि नै यदि कसैलाई उपचार नै नभएको रोग लाग्यो र यो रोगबाट निकै कष्ट भयो भने यस्तो अवस्थामा डाक्टरको सहयोग लिएर बिरामीलाई मृ’ त्यु दिने पक्षमा थियो । अब बिरामीको परिवारको सहमतिमा डाक्टरको सहयोगमा १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई मृ’ त्यु दिन सकिनेछ ।
यसो गर्नाले परिवारको कष्ट कम गर्न सकिने तर्क दिइएको छ । यो निर्णयका विषयमा डच स्वास्थ्यमन्त्री डी जोंगले संसदलाई एक पत्र लेखेका छन् ।पत्रमा उनले देशमा उपचार नभएको रोगबाट ग्रसित एक १२ वर्षका बालकलाई उनको परिवारको यच्छाअनुसार मृbत्यु दिनको लागि कानुनमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । कानुन संशोधनको लागि यस्ता बिरामीको परिवार भावनात्मक, आर्थिक र मा’नसिक क’ष्टमा रहेको तर्क दिइएको छ । मृ ‘त्यु दिनको लागि माता पिताको अनुमति अनिवार्य हुनेछ ।
त्यसैले त्यस्ता व्यवसायहरुमा संलग्नहरुले आफ्नै खर्चमा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।हाल अधिकांश अस्पतालमा ५ हजार ५ सय तिरेर पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। निजी अस्पतालहरुले भने उक्त शुल्कमा थप १० प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने बताइएको छ । तर पैसा तिरेर सबैले पीसीआर परीक्षण गराउने अवस्था नभएको भन्दै स्थानिय स्तरवाट यसको वि’रोध हुँदै आएको छ । लामो समयको लकडाउन र ब्यवसाय सबै ठप्प भएको अवस्थामा सवै सर्वसाधारणको आम्दानीको श्रोत नभएकाले सबैले ब्यक्तिगत खर्चमा पीसीआर परिक्षण गराउन नसक्ने भन्दै वि’रोध भएको हो ।
Prevदसैंमा घर जानेहरु फर्कन नपाउने कुरा साँचो हो ?
Nextयसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलाई आ’क्र’मण गर्नेको पहिचान खुल्यो, प्रहरीले सुरु गर्यो कारवाहीको प्रक्रिया
यसरी छापिँदो रहेछ हामीले चलाउने नेपाली नोटहरु (भिडियो सहित) सबैको जानकारीको लागि सेयर गरौं
रमेश प्रसाईका फ्यानहरुका लागि अहिलेसम्मकै खुशीको खबर भिडियो
यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! कसरी बेश्ने त ….? पुरा पढी सेयर गर्नुहोस
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73686)